China ERW 32mm Tube Mill orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | TUBO
Ity fitaovana ity dia ampiasaina manokana amin'ny famokarana fantsom-pandrefesana mahitsy miverimberina avo lenta ary fantsona toradroa mifanitsy sy fantsona miendrika manokana. Ny firafitry ny fitaovana dia avy amin'ny uncoiler ka hatramin'ny halavany fanetezana.
Application:GI, Fanamboarana, Automotive, fantsona mekanika ankapobeny, fanaka, fambolena, simia, solika, gazy, lalan-drano, fotodrafitrasa.
Coil vy → Double-arm Uncoiler → Fanetezana sy famaranana fanapahana → Coil Accumulator → Mamorona (Unit Flattening + Fitaovana mitondra fiara lehibe + Fitaovana mandrafitra + Fitaovana mpitari-dàlana + Fitaovana fanamafisam-peo mihombo matetika + Roller Squeeze) → Deburring → Fangatsiahana rano → Sizing sy fanitsiana → Fanapahana tsofa → Mpanatitra pipa → Fonosana → Fanatobiana trano
1.Fahombiazan'ny famokarana avo.
3.High Hery, miasa milamina amin'ny milina haingana ny masinina, izay manatsara ny kalitaon'ny vokatra.
4. Ratsy vokatra ambany
5.Save Roller Chaning Time
6.Saveve amin'ny filokana
Steel ambany karbaona, Q235, Q195
Pipe toradroa sy mahitsizoro
0,5 - 2.0mm (Sodina boribory)
0,5 - 1,5mm (Sodina Pipe)
Ny halavan'ny fantsona
380V, dingana 3,
50Hz (miankina amin'ny toerana eo an-toerana)
220V, dingana tokana, 50 Hz
Haben'ny tsipika iray manontolo
Ampiasaina Tube Tube
Tube Mill Machine Sina
Tube mpanamboatra milina Tube
Mpamatsy Tube Tube